Vatungamiriri vatatu ava maererano nezvigadzirwa ndiJSC Sovkhoz Teplichny, JSC Sovkhoz Yuzhno-Sakhalinsky uye JSC Sovkhoz Zarechnoye, zvichiteerana mazana mana, mazana matatu nemakumi mairi nemakumi manomwe nemashanu nemazana mashanu pahekita
Mudunhu iri, 85 muzana yenzvimbo inogarwa nembatatisi yakakohwewa. Mabhizimusi mahombe ekurima akatopedza basa remumunda, vamwe vese varimi vekurima nevarimi vanoramba vachikohwa chero bedzi mamiriro ekunze akanaka.
Mapurazi echitsuwa atora mukana wakanaka mukukohwa mamwe marudzi emiriwo. Chikwata cheTeplichny chakachengeta anopfuura mazana matatu nemakumi matatu ematani ekarotsi uye anenge mazana mashanu ematani ebheti. Iyo purazi yehurumende "Yuzhno-Sakhalinsky" iri kushanda musimba: anopfuura matani zana nemakumi maviri emakarotsi uye anopfuura matani chiuru ebheti. Vashandi veSokolovsky bhizinesi rekurima vatangawo kukohwa basa paminda yemiriwo: anopfuura matani mana emakarotsi uye anopfuura 360 matani ebeet akatotorwa. Zvakare anopfuura matani mana emakarotsi uye angangoenzana akaenzana mabheti akaunganidzwa nechikwata cheV LLC "Murliya".
Iyo yepamusoro goho bhaa inobatwa naSovkhoz Teplichny JSC - 600 c / ha yemakarotsi, 400 c / ha yebeche uye Yuzhno-Sakhalinsky JSC - 400 c / ha uye 350 c / ha, zvichiteerana.
Mushandirapamwe wekukohwa uchapera pamwe nekuunganidzwa kwemuchena machena kabichi uye Peking kabichi.